FMUSER FU-1000C 1KW FM ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာန
စုစုပေါင်း (USD): 1840
FMUSER FU-1000C အကြောင်း
FU-1000C အတွက် အထူးကမ်းလှမ်းချက်
19% လျှော့စျေး၊ အချိန်အကန့်အသတ်သာ
FMUSER FU-1000C 1KW FM Transmitter ၏ အကြိုသုံးသပ်ချက်
အရည်အသွေးမြင့် ကီလိုဝပ် FM ရေဒီယို အသံလွှင့်စက်၏ လက္ခဏာများကား အဘယ်နည်း။ ဘတ်ဂျက်စျေးနှုန်း? နာမည်ကြီးတံဆိပ်လား? ဒါမှမဟုတ် CD နဲ့တူတဲ့ auditory effect လား။ ဤလက္ခဏာများပါရှိသော ကီလိုဝပ်အဆင့် အသံလွှင့်စက်ကို သင်ဝယ်ယူရန် လိုအပ်ပါက၊ FMUSER မှ ဤနည်းဖြင့် ဤအသံလွှင့်စက်ကို အကြံပြုပါသည်- FU-1000C 1000W FM ရေဒီယို အသံလွှင့်စက်။
အကောင်းဆုံးကီလိုဝပ်အဆင့် FM အသံလွှင့်စက်ကို ရွေးချယ်လိုပါက FU-1000C ကိုရွေးချယ်ပါ၊ သင့်ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနသို့ သင့်လျော်သောစျေးနှုန်းဖြင့် အစွမ်းထက်သော အသံလွှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲကိရိယာကို ပေါင်းထည့်ပါမည်။
၎င်းသည် အလတ်စား FM ရေဒီယို အော်ပရေတာများအတွက် ပထမဆုံး အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်မှုလည်း ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ကမ်းရိုးတန်းနိုင်ငံများ သို့မဟုတ် ဒေသများ (ဥပမာ ဖိလစ်ပိုင်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်စသည်ဖြင့်) တွင်နေထိုင်ပါက၊ ခန့်မှန်း၍မရသော အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းဆ၊ မိုးရွာသွန်းမှု၊ နေရောင်ခြည်နှင့် အခြားထိန်းချုပ်မရနိုင်သောအချက်များနှင့် ရင်ဆိုင်ရမည်ကို စိတ်ကူးကြည့်ပါ။
Transmitter သည် မည်မျှလှပသည် (သို့) Brand သည် မည်မျှနာမည်ကြီးနေပါစေ၊ ဥပမာ- စိုစွတ်လွန်းသောလေထုတွင် အချက်တစ်ချက်တည်းဖြင့်၊ ထိုစျေးကြီးသော transmitter များကို ဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ပါသလား။ ဒီပို့လွှတ်တာကို အီတလီ ဒါမှမဟုတ် အမေရိကကနေ တင်သွင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့အချက်တွေက transmitter ရဲ့ သက်တမ်းကို အလွန်တိုစေပါလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်၊ အဘယ်ကြောင့်ပိုမိုဘတ်ဂျက် FM အသံလွှင့်စက်ကိုမရွေးချယ်သနည်း။
FMUSER FU-1000C သည် ရွေးချယ်မှုအများဆုံး 1KW FM အသံလွှင့်စက်ဖြစ်သည်။
FU-1000C FM အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း၏တန်ဖိုးသည် အထက်ဖော်ပြပါဘောင်များထက် များစွာပိုသည်ကို သတိပြုပါ။ FU-1000C ထုတ်လွှင့်သည့် FM ထုတ်လွှင့်သည့်ကိရိယာသည် USB မျက်နှာပြင်ပါရှိသော 1000W FM အသံလွှင့်စက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် FM ထုတ်လွှင့်မှုစွမ်းရည်က ၎င်းရဲ့ ထုတ်လွှင့်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့် သင့်ကို လွင့်ပါးသွားစေနိုင်ပါတယ်။
ထည့်သွင်းထားသော USB အင်တာဖေ့စ်သည် မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း အဆင့်အနည်းငယ်အတွင်း အဆင့်အနည်းငယ်မျှဖြင့် လူသား-ထုတ်လွှင့်သည့် အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှု၏လုပ်ဆောင်ချက်ကို အမှန်တကယ်သိရှိနိုင်သည်- သင်၏ USB ကိုထုတ်ကာ အသံလွှင့်စက်သို့ ပလပ်ထိုးပါ၊ ပြေးခုန်ပစ်သည့် ဒိုင်ခွက်ကို အသုံးပြုပါ၊ ကျန်အရာမှာ သီချင်းဖွင့်ရန်သာ ကျန်တော့သည် !
တော်တော်လွယ်တယ်ဟုတ်လား။ ဒါအမှန်ပါပဲ၊ ဒီ 1000 W FM အသံလွှင့်ထုတ်လွှင့်မှုနဲ့အတူ၊ FMUSER FU-1000C က ယူဆောင်လာတဲ့ အရည်အသွေးမြင့် စိတ်ကြိုက်အသံပျော်ရွင်မှုကို သင်ရနိုင်မှာပါ
FU-1000C သည် သင့်ထုတ်လွှင့်မှုသိပ်သည်းဆကို ပိုမိုစူးစမ်းလေ့လာနိုင်စေမည့် RDS input interface ပါ၀င်သော 1000W ထုတ်လွှင့်သော FM ထုတ်လွှင့်သည့်ကိရိယာဖြစ်သည်။
သင့်ပရိသတ်များနှင့် သင့်ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ပိုမိုရရှိနိုင်စေရန် အသံအချက်ပြမှုများအပြင် စကားလုံးများဖြင့် သင့်ပရိသတ်နှင့် ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
FU-1000C 1000W FM transmitter သည် ကောင်းမွန်သောအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ရန် သန္နိဋ္ဌာန်ချထားသည့် ရှေ့ပြေးဒိုင်ခွက်ထည့်သွင်းမှုပါရှိသည်။
ဤအသံလွှင့်ကိရိယာသည် လည်ပတ်မှုနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် ရှုပ်ထွေးသော်လည်း၊ အထူးသဖြင့် အသုံးပြုရခက်ခဲသော အသံလွှင့်ကိရိယာများအပေါ် ပြင်းပြင်းထန်ထန် အာဃာတစိတ်ရှိသော သုံးစွဲသူများအတွက် ၎င်းသည် တစ်စုံတစ်ဦးအတွက် ဧဝံဂေလိတရားတစ်ခုဖြစ်သည်။ .
ကာကွယ်မှုအရ၊ FU-1000C FM စတီရီယိုထုတ်လွှင့်မှုထုတ်လွှင့်စက်သည် ပြင်ပနှင့်အတွင်းပိုင်းပြဿနာများကြောင့် ထိခိုက်ခံရခြင်းကို ထိရောက်စွာရှောင်ရှားနိုင်သည်၊ ဥပမာအားဖြင့် အပူလွန်ကဲသောအပူချိန်၏ရှုထောင့်တွင်၊ ဤနေရာတွင် ရိုးရာ FM အသံလွှင့်စက်သည် မည်သည့်အရာဖြစ်သည်- အလုပ်အပူချိန်ရရှိသည် ပိုမြင့်သည်နှင့် ပိုမြင့်ပြီး transmitter လောင်ကျွမ်းသွားသည်အထိ ရပ်မည်မဟုတ်ပါ။
ယင်းအစား၊ FU-1000C FM ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်သည့်ကိရိယာသည် အပူလွန်ကဲသောအပူချိန်တွင် အလိုအလျောက်ကာကွယ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ FM ထုတ်လွှင့်မှုအင်တင်နာများ၏ ချိတ်ဆက်မှုမတူညီမှုကြောင့် ရပ်နေသောလှိုင်းအချိုးသည် ပိုမိုမြင့်မားလာသောအခါတွင် ၎င်း၏ကိုယ်ကိုကိုယ်ကာကွယ်မှု ဆက်လက်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် သင့်ရေဒီယိုဌာနအတွက် FU-1000C ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည် သင့်အချိန်ကုန်ကျစရိတ်ကို သက်သာစေပြီး အလုပ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်။ FU-1000C FM စတီရီယိုထုတ်လွှင့်မှု ထုတ်လွှင့်မှုတွင် တာရှည်ခံမှုနှင့် လက်တွေ့ကျသော လက္ခဏာများ ပါရှိပြီး သင့်ရေဒီယိုစခန်း၏ အမှန်တကယ်ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို ထိထိရောက်ရောက် သက်တမ်းတိုးနိုင်ပြီး ဧရိယာကျယ်ဝန်းသော ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရေဒီယိုအချက်ပြကွန်ရက်ကို တည်ဆောက်ရာတွင် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
FMUSER FU-1000C သည် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော 1KW FM ရေဒီယိုစခန်း၏ အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
အောက်ပါအခြေအနေများတွင် တည်ငြိမ်သော အလယ်အလတ်အကွာအဝေး FM ထုတ်လွှင့်မှုကို ပြုလုပ်လိုပါက Fu-1000C သည် သင့်အတွက် သေချာပါသည်။ ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုအတွက် အရောင်းရဆုံး 1000W FM transmitter အဖြစ်၊ FU-1000C သည် drive-in Church၊ ဘုရားကျောင်းရပ်နားရန်နေရာ၊ drive-in church၊ drive-in movie အပါအဝင် မတူညီသောအခြေအနေများတွင် အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း သက်သေပြထားပါသည်။ စသည်တို့
FM Transmitter Pickup တွင် Medium Power Drive
အကယ်၍ သင်သည် ဒရိုက်အင်ချာ့ချ်များနှင့် drive-in ပြဇာတ်ရုံများပါရှိသော မြို့ငယ်လေးကို စီမံခန့်ခွဲသော ရေဒီယိုမန်နေဂျာဖြစ်ပါက ယုံကြည်စိတ်ချရသော FU-1000C FM အသံလွှင့်စက်သည် သင့်ထုတ်လွှင့်မှုရေးရာများကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပြီး သင်နှင့် သင့်မြို့အတွက် အကန့်အသတ်မရှိသော စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများကို ဖန်တီးပေးနိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ သင်သည် drive-in ဘုရားကျောင်း သို့မဟုတ် drive-in ရုပ်ရှင်ကို လုပ်ဆောင်နေပြီး သို့မဟုတ် drive-in ဝန်ဆောင်မှုအသစ်ကို စမ်းကြည့်လိုပါက၊ သင့်အား လိုက်ပါရန် ယုံကြည်စိတ်ချရသော FM ရေဒီယို အသံလွှင့်စက် လိုအပ်ပါသည်။
မည်မျှအဓိပ္ပာယ်ရှိမည်ကို မြင်ယောင်ကြည့်ပါ- 2021 ကပ်ရောဂါအောက်တွင် မရေမတွက်နိုင်သောမိသားစုများအတွက် နွေးထွေး၊ အသက်ဝင်ပြီး ဘေးကင်းလုံခြုံသော မိသားစုဖျော်ဖြေမှုကို ပေးဆောင်ရန်။ “ဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်၊ ကျွန်တော့်ဇနီး ဆယ်လီနဲ့ ကျွန်တော်ဟာ အိမ်နဲ့ မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့ ကားပြဇာတ်ရုံတစ်ခုမှာ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ သီတင်းပတ်များစွာကို ကုန်ဆုံးခဲ့ပြီး အခြားမိသားစုများစွာကလည်း ကျွန်တော်တို့လိုပဲ မိသားစုတွေကို ပွေ့ဖက်တာ၊ ကားပေါ်တက်တာ ဒါမှမဟုတ် ကားထဲမှာ ရုပ်ရှင်ကြည့်တာ၊ .
"လာမယ့် သီတင်းပတ်ကုန်မှာ နောက်ထပ် အစီအစဉ်တစ်ခုစဖို့ မစောင့်နိုင်တော့ဘူး!"
--- Aaron၊ Ilocos Sur၊ Candon၊ ဖိလစ်ပိုင်
Pro FM Transmitter သည် ဒီဇိုင်းတွင်သာ မကပါ။
ကောင်းမွန်သော FM အသံလွှင့်စက်သည် အစွမ်းထက်သော စွမ်းဆောင်ရည်၊ ဆွဲဆောင်မှုရှိသော အသွင်အပြင်ဖြင့်သာမက ပိုအရေးကြီးသည်မှာ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော ဈေးနှုန်းဖြင့် ဖြစ်သည်။ FU-1000C၊ ငွေရောင်-အနက်ရောင် သွယ်တန်းထားသော ဒီဇိုင်းကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော FM transmitter သည် အသုံးအများဆုံး အသံလွှင့်စက်များတွင် မရှိသော လက္ခဏာရပ်များကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် FM ရေဒီယို အော်ပရေတာများစွာမှ ယုံကြည်လက်ခံထားသည်။
FU-1000C သည် drive-in ဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့် drive-in ပြဇာတ်အတွက် အကောင်းဆုံး FM transmitter ဖြစ်ပြီး ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်မှုသည် FU-1000C FM ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုထုတ်လွှင့်ခြင်းကို ရွေးချယ်ရခြင်း၏ အခြေခံအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။
ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုအတွက် အကောင်းဆုံး 1000W FM အသံလွှင့်စက်ကို သင်ရှာနေပါက FU-1000C ကို ရွေးချယ်ပါ။
အကယ်၍ သင်သည် drive-in ရုပ်ရှင်များအတွက် အကောင်းဆုံး 1000W FM အသံလွှင့်စက်ကို ရှာဖွေနေပါက FU-1000C ကို ရွေးချယ်ပါ။
ဘုရားကျောင်းထုတ်လွှင့်မှုအတွက် အကောင်းဆုံး 1000W FM အသံလွှင့်စက်ကို သင်ရှာနေပါက FU-1000C ကို ရွေးချယ်ပါ။
ဘုရားကျောင်းရပ်နားရာနေရာအတွက် အကောင်းဆုံး 1000W FM အသံလွှင့်စက်ကို သင်ရှာဖွေနေပါက FU-1000C ကို ရွေးချယ်ပါ။
FMUSER FU-1000C သည်အသုံးပြုရန်အလွန်ရိုးရှင်းသည်၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင်သင်သည် USB အားအင်တာဖေ့စ်သို့ MP3 ဖိုင်နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး power supply သို့ချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်သည်။ အသုံးပြုသူလက်စွဲစာအုပ်ကို လေ့လာခြင်း သို့မဟုတ် ပျင်းစရာကောင်းသော လက်စွဲလုပ်ဆောင်ချက်ကို များစွာအာရုံစိုက်ရန် မလိုအပ်ဘဲ၊ transmitter သည် ဘေးကင်းပြီး ပုံမှန်အတိုင်း အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
ဆုတောင်းခြင်း သို့မဟုတ် ရုပ်ရှင်ကို ဘေးကင်းစွာကစားရန် အာရုံစိုက်ရန်သာ လိုအပ်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော FU-1000C သည် ကျန်တာတွေကို ဂရုစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ FMUSER သည် သင့်အား အချိန်တိုအတွင်း FU-1000C အကြောင်း ပိုမိုသိရှိစေရန်အတွက် YouTube တွင် ရိုးရှင်းသော တပ်ဆင်မှု ဗီဒီယိုကိုလည်း ပေးပါမည်။
ထူးချွန်သော အသံလွှင့်အရည်အသွေးသည် အရာအားလုံးကို ဖြစ်နိုင်ချေရှိစေသည်။
FU-1000C သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အလတ်စား FM ရေဒီယိုလိုင်းတိုင်း၏ တကယ့် ကီလိုဝပ် မြင့်မားသော ထုတ်လွှင့်မှု အရည်အသွေးကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းနှင့် အစွမ်းထက်သောစွမ်းဆောင်ရည်အပြင် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုသည် FU-1000C ၏အကြီးမားဆုံးသောသွင်ပြင်လက္ခဏာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
၎င်း၏ အံ့သြဖွယ် FM ထုတ်လွှင့်မှု အရည်အသွေးဖြင့် FU-1000C သည် ရုပ်သံလွှင့်ကုမ္ပဏီများကြားတွင် မြင့်မားသော ထိရောက်မှုနှင့် လူကြိုက်များမှုကို အောင်မြင်စွာ ရရှိခဲ့ပြီး ပရော်ဖက်ရှင်နယ်/အပျော်တမ်း FM ရေဒီယိုချစ်သူများနှင့် အခြားသော FM အသံလွှင့်အဖွဲ့များစွာတို့၏ နှစ်သက်မှုကို ရရှိခဲ့သည်။
အချို့သောလူများသည် ကျွန်းပေါ်တွင် အထူးရေဒီယိုမင်္ဂလာပွဲကျင်းပရန် ၎င်းကိုအသုံးပြုကြသည်။
"ငါချစ်ရတဲ့ကေသီနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်၊ ငါတို့မြို့နားက ကျွန်းငယ်လေးမှာ မင်္ဂလာပွဲကျင်းပဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်၊ ငါက RF Engineer တစ်ယောက်ဖြစ်လို့ သူ့အတွက် မမေ့နိုင်တဲ့ ရေဒီယိုမင်္ဂလာပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ပြီးပြည့်စုံသော ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနကို တည်ထောင်ရန်၊ ကျွန်ုပ်သည် ထုတ်လွှင့်မှုအကြိမ်ရေ 87.7mhz ရှိသည့် ဆွေမျိုးများနှင့် မတက်ရောက်နိုင်သော မိတ်ဆွေများအတွက် မင်္ဂလာပွဲထုတ်လွှင့်ရန်အတွက် အလတ်စား FM ရေဒီယိုစခန်းတစ်ခုကို တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ ရေဒီယိုက ထွက်လာတဲ့ ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ ဆူညံသံကင်းတဲ့ တေးဂီတကို နားထောင်ရင်း လူတိုင်းရဲ့ ကောင်းချီးတွေနဲ့ တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ဖက်တွယ်ထားခဲ့တယ်"
-- အဟ်မဒ်၊ ဂျကာတာ၊ အင်ဒိုနီးရှား
စကားလုံးတစ်လုံးတွင်၊ FMUSER ၏ FU-1000C FM ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုထုတ်လွှင့်မှုသည် သင်စိတ်ကူးထက်ပို၍ထုတ်လွှင့်နိုင်သည်။
သင်၏ အဆုံးစွန်သော ထုတ်လွှင့်မှုလိုအပ်ချက်များကို အမှန်တကယ်ဖြည့်ဆည်းပေးသည့် 1KW FM အသံလွှင့်စက်
ကီလိုဝပ်အဆင့် FM အသံလွှင့်စက်ကို မဝယ်ခင် ဒီပြဿနာတွေကြောင့် ဒုက္ခရောက်ဖူးပါသလား။:
ကီလိုဝပ်အဆင့် FM စတီရီယို အသံလွှင့်စက်ကို ဝယ်ယူသည့်အခါ မည်သည့်အရာများကို အာရုံစိုက်သင့်သနည်း။
အဘယ်ကြောင့် 1500W FM အသံလွှင့်စက် သို့မဟုတ် 3000W FM အသံလွှင့်စက်ကို မရွေးချယ်ဘဲ၊ ယင်းအစား FMUSER 1000W FM အသံလွှင့်စက်ကို ရွေးချယ်ပါ။
FM ရေဒီယို အသံလွှင့်စက်ကို ဝယ်ယူခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်ရနိုင်သော အချက်အလက် တစ်စုံတစ်ရာ ရှိပါသလား။ ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုအတွက် FM အသံလွှင့်စက်ကို မ၀ယ်ခင်မှာ ဘာတွေသိသင့်လဲ။
လူအများစုသည် အမှတ်တံဆိပ်ကို ဦးစွာစဉ်းစားကြပြီး နောက်တွင် ဈေးနှုန်းအားဖြင့် စဉ်းစားကြမည်ဖြစ်သည်။ အမှန်မှာ၊ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သော အချက်အလက်များအပြင်၊ FM ထုတ်လွှင့်မှုထုတ်လွှင့်ခြင်း၏ အချို့သောဘောင်များသည် ဝယ်ယူမှုအတွက် အရေးကြီးသော ကိုးကားမှုအခြေအနေများဖြစ်သည်။
FMUSER သည် စတီရီယို FM အသံလွှင့်စက်ကို မဝယ်ယူမီ သင်စဉ်းစားသင့်သည့် အရေးကြီးသော ကန့်သတ်ဘောင်များကို မိတ်ဆက်ရန်အတွက် အောက်ပါအကြောင်းအရာတွင် FU-1000C ကို နမူနာအဖြစ် ယူပါသည်။
ပထမဦးစွာ၊ သင်သည် FM အသံလွှင့်စက်၏ ပုံပျက်ခြင်းကို ဆင်ခြင်သင့်သည်။ သင်သိသည့်အတိုင်း၊ စတီရီယို FM ထုတ်လွှင့်ခြင်းသို့ သင်ထည့်သွင်းသည့် အချက်ပြမှုတိုင်းသည် တူညီသောအနေအထားမှ လုံးလုံးလျားလျား ထုတ်လွှင့်နိုင်မည် မဟုတ်သော်လည်း၊ အချက်ပြပုံပျက်ခြင်းမှာ ရှောင်လွှဲ၍မရပါ။
အချို့သော FM အသံထုတ်လွှင့်သူများ၏ အသံချဲ့စက်တွင် အသံအချက်ပြမှုကို ပုံပျက်သွားစေမည့် အချက်ပြချဲ့ထွင်မှုလုပ်ဆောင်ချက်ပါရှိသည်။
FMSUER ၏ RF အင်ဂျင်နီယာများသည် အံ့သြဖွယ်ဒေတာအချို့ကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပြသသည်- tသူသည် FU-1000C FM အသံထုတ်လွှင့်သူ၏ ပုံပျက်ခြင်းစမ်းသပ်မှုရလဒ်များသည် 30 Hz - 15000 Hz 0.02%, အများသူငှာထုတ်လွှင့်သော FM ထုတ်လွှင့်မှု၏ 0.02% အောက်သာလွန်သည်။
FM ရေဒီယို အသံလွှင့်စက်များမှ ပြီးပြည့်စုံသော အသံအရည်အသွေးကို လိုက်စားသူများအတွက် ကောင်းချီးတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤသည်မှာ အသိအမှတ်ပြုထားသော ဘုံအသိဖြစ်သည်- စတီရီယို ခွဲခြားခြင်းသည် စတီရီယိုအာရုံအတွက် ကြီးစွာသော သက်ရောက်မှုတစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်။ စတီရီယိုပိုင်းခြားမှုကို ပိုမှုန်ဝါးလေလေ၊ စတီရီယိုအာရုံခံစားမှု အားနည်းလေဖြစ်သည်။ FM ရေဒီယို အသံလွှင့်ထုတ်လွှင့်သူအများစု ရရှိနိုင်သော စတီရီယို ခွဲထွက်မှုတန်ဖိုးကို သင်သိပါသလား။
ဟုတ်သည်၊ 40 Hz တွင် 500 dB ထက်ကြီးသည် သို့မဟုတ် ညီမျှသည်။
ဤအညွှန်းကိန်းကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လျှပ်စစ်နည်းပညာကော်မရှင်က သတ်မှတ်သည်။ သို့သော် ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ FMUSER ၏ FU-1000C စတီရီယို FM အသံလွှင့်စက်သည် 60 dB ထက်ပို၍ အောင်မြင်နိုင်သည်။
မင်းရဲ့ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနအတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုလို့ ထင်နေသေးတာ မဟုတ်လား။ သင့်ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနနောက်လိုက်များအတွက် ပိုမိုကြီးမားသော စတီရီယိုအသံလက်ခံမှုအတွေ့အကြုံကို ဖန်တီးကြပါစို့။
လက်ရှိ အသံလွှင့်ဌာန ပရိသတ်ကို မည်ကဲ့သို့ ထိန်းသိမ်းပြီး ပရိသတ် အသစ်များကို ဆွဲဆောင်နိုင်သနည်း ဆိုသည်မှာ ရေဒီယို အော်ပရေတာများအတွက် ထာဝရ ဆွေးနွေးနေသည့် ခေါင်းစဉ် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဆူညံသံအပြည့်ဖြင့် ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကို မည်သူမျှ နားမထောင်လိုသည်မှာ သေချာပါသည်။
ဒီတော့ မေးစရာရှိတာက၊ မြင့်မားတဲ့သစ္စာရှိရေဒီယို အချက်ပြမှုကို ပရိသတ်ဆီ ဘယ်လို လုံးလုံးလျားလျား ပို့နိုင်မလဲ။ စိတ်မပူပါနဲ့ FU-1000C က ဒီပြဿနာကို ပြီးပြည့်စုံစွာ ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။
မြင့်မားသော signal-to-noise ratio ရှိသော FM စတီရီယိုထုတ်လွှင့်သူအနေဖြင့် (≥ 70dB) ၊ သင့်ရေဒီယိုလိုင်းသို့ FU-1000C FM ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်စက်ကို ပေါင်းထည့်လိုက်ရုံဖြင့် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော ထုတ်လွှင့်သည့် ဆူညံသံအမျိုးမျိုးအတွက် စိတ်ပူစရာမလိုတော့ပါ။
FU-1000C ရေဒီယို FM transmitter ကို စမ်းသပ်ပြီးနောက် အခြား FM stereo transmitter များကို ရွေးချယ်ရန် ရည်ညွှန်းချက်အဖြစ် FMUSER စမ်းသပ်အဖွဲ့မှ ရရှိသော တိကျသောဒေတာကို သင်အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း FMUSER မှ သင့်ရွေးချယ်မှုမှ အကျိုးကျေးဇူးရရှိနိုင်မည်ဟု ရိုးသားစွာမျှော်လင့်ပါသည်။
Frequency Stabilization နည်းလမ်း PLL Phase-locked loop
Nominal Transmission Frequency 87 MHz - 108 MHz (အခြားကြိမ်နှုန်းများကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်)
ကြိမ်နှုန်းသွေဖည် ± 75 Hz
ကြိမ်နှုန်းအဆင့်တန်ဖိုး 50 kHz
Output Impedance ၊ 50 Ω
RF Output Connector L29-K သို့မဟုတ် အခြား သတ်မှတ်ထားသော ချိတ်ဆက်ကိရိယာများ
Output RF Power ပါ။0-1000 W စဉ်ဆက်မပြတ်ချိန်ညှိနိုင်သည်။
Output Power Deviation ၊ ± 10 W
ရှေ့ပြေး Frequency Deviation
Harmonic Radiation ကို နှိမ်နင်းခြင်း။
အသံထည့်သွင်းမှု အင်တာဖေ့စ် XLR / USB / RCA
အသံထည့်သွင်းမှုအဆင့် < 15 dBV
Noise Ratio ကို လက်မှတ်ရေးထိုးပါ။ ≥ 70 dB (1 kHz၊ 100% မော်ဂျူး)
စတီရီယိုခွဲခြားမှု ≥ 60 dB (L → R၊ R → L)
ပုံပျက် ≤ 0.02% (30 Hz - 15000 Hz၊ 100% မော်ဂျူး)
ကြိမ်နှုန်းတုန့်ပြန်မှု 50 - 15000 Hz
အသံကြိုတင်တင်ခြင်း။0μs / 50 μs / 75 μs ရွေးချယ်နိုင်သည်
ဘယ်ညာ ချန်နယ်အဆင့် ကွာခြားချက် ≤0.05 dB (100% မော်ဂျူလာ)
ကိုယ်ထည်အရွယ်အစား 2U (အလျား 530 မီလီမီတာ × အနံ 340 မီလီမီတာ × အမြင့် 100 မီလီမီတာ)
ကိုယ်ထည်အရွယ်အစား 2U (အလျား 20.8 လက်မ × အကျယ် 13.3 လက်မ × အမြင့်4လက်မ)
စက်အလေးချိန် 10 ကီလိုဂရမ်
စက်အလေးချိန် 22 ပေါင်
အပူလွန်ကျူး မုဒ်: လေအေး
Chassis Standard ပါ။ 19 လက်မ
ကာကွယ်မှုမုဒ် မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့် မြင့်မားသော VSWR ကာကွယ်မှုကို ပံ့ပိုးထားသည်။
power supply ဗို့အား
စားသုံးမှု: 1500 ဒဗလျူ
FU-1000C 1kW FM Transmitter ၏ အဓိက ပေါ်လွင်ချက်များ
All-in-one Rack အမျိုးအစား ဒီဇိုင်း- အလွန်ကောင်းမွန်သော ထုတ်လွှင့်မှုအတွေ့အကြုံအပြင် "သေလွယ်သော" လုပ်ဆောင်ချက်ပါ ပါရှိသည်၊ ဤ 1000W FM ရေဒီယို အသံလွှင့်စက်သည် ပါဝါအလတ်စား FM အသံလွှင့်ဌာနများ၏ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
လက်တွေ့ကျ USB ဒီဇိုင်း အော်ဒီယိုထည့်သွင်းမှုအင်တာဖေ့စ်သည် စိတ်ကြိုက်အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုး၏ MP3 အသံအချက်ပြမှုများကို လျင်မြန်စွာတင်သွင်းနိုင်ပြီး အလိုအလျောက်ဖော်ထုတ်ရန် ကူညီပေးသည်၊ သင်သည် မတူညီသောအသံအကြောင်းအရာကို အချိန်မရွေးပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ထူးထူးခြားခြား အသံမုဒ် ဒီဇိုင်း သင်၏ အထူးအသံပြန်ဖွင့်ခြင်း လိုအပ်မှုကို ဖြည့်ဆည်းရန် သင်တစ်ဦးတည်း/စတီရီယို အော်ဒီယိုမုဒ်ကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။
SCA / RDS Subcarrier ထည့်သွင်းမှု- စာသားထုတ်လွှင့်မှုအချက်ပြမှုနှင့် အသံထုတ်လွှင့်မှုအချက်ပြမှုတို့ကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြုမှုအတွက် ပံ့ပိုးထားပြီး၊ လူသား-စက်-လူသား အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကို တိုးမြှင့်ပေးပြီး ရိုးရာထုတ်လွှင့်မှု၏ ကွဲပြားမှုကို ချဲ့ထွင်ပေးသည်။
XLR / RCA / USB အဝင်များ စတီရီယိုအသံအချက်ပြမှုများကို အသံအမြတ်လုပ်ဆောင်ချက်၏ အရွယ်အစားကို မထင်သလို ချိန်ညှိရန် ပံ့ပိုးထားပြီး၊ ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုကို ပိုမိုရွှင်လန်းစေသည်။
1KW TPO 1000W အထိ ချိန်ညှိနိုင်ပြီး ခလုတ်ဖွင့်/ပိတ် လုပ်ဆောင်ချက်ကို ထောက်ပံ့ပေးထားသည်။
ဆန်းသစ်သော SWR ကာကွယ်မှု- ပုံမှန်မဟုတ်သော SWR ကြောင့်ဖြစ်ရသည့် ပြဿနာသည် transmitter လည်ပတ်မှုကို မထိခိုက်စေကြောင်း သေချာစေရန်၊ transmitter သို့ ချိတ်ဆက်ရန် အင်တာနာမရှိပါက သို့မဟုတ် transmitter နှင့် antenna နှင့် မကိုက်ညီသည့်အခါ၊ function သည် အလိုအလျောက် စတင်ပြီး transmitter ကို ကာကွယ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
အတွင်းဘက်အသုံးအဆောင် အကာအကွယ် အပြည့်အစုံ- လေယာဉ်ကိုယ်ထည် အပူချိန် အလွန်မြင့်မားသောအခါ၊ ထုတ်လွှင့်သူသည် အကာအကွယ်အခြေအနေသို့ အလိုအလျောက် ဝင်ရောက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် transmitter ၏ အတွင်းအပူချိန်မှ ပြင်းထန်သော သက်ရောက်မှုများစွာကို ထိရောက်စွာ ရှောင်ရှားနိုင်သည်။
Micro-Processing ဖြေရှင်းချက်- FM ရေဒီယို အသံလွှင့်စက်၏ ကြာရှည်ခံမှုနှင့် ထိရောက်မှုကို သေချာစေသည်။
RS232 အဝေးထိန်းနည်းပညာ- Transmitter ကို မျက်နှာချင်းဆိုင် မလည်ပတ်ဘဲ ချက်ချင်းလုပ်ဆောင်နိုင်စေရန် အဝေးထိန်းစနစ်အတွက် ကွန်ပျူတာနှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။
Signal Transmission Control- ၎င်းသည် စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ဦးဆောင်နေသည့် အလွန်နိမ့်သော ထုတ်လွှတ်မှုပါဝါနှင့် ကြိမ်နှုန်းသွေဖည်မှု စံနှုန်းကို အမှန်တကယ် ရရှိခဲ့ပါသည်။
ပိုမိုချောမွေ့ကြည်လင်သော အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဒေတာပြသမှုကို ပေးဆောင်ရန် စံ 153 x 50 မီလီမီတာ OLED မျက်နှာပြင်ကို အသုံးပြုထားသည်။
Jog Dial သည် လည်ပတ်မှုကို ရိုးရှင်းစေပြီး အချိန်ကုန်ကျစရိတ်ကို များစွာလျှော့ချပေးနိုင်သည့် သင်၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိထိရောက်ရောက် မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါသည်။
Built-in မီနူးစကားဝှက်ကာကွယ်မှုနည်းပညာသည် အမှားအယွင်းများကို ရှောင်ရှားနိုင်ပြီး သင်၏ လျှို့ဝှက်ဖိုင်အကြောင်းအရာကို ကာကွယ်နိုင်သည်။
သင့်အင်တင်နာအတွက် အသင့်တော်ဆုံး ကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေးကို အလိုအလျောက် သိရှိနိုင်စေရန် အင်တင်နာအပြည့် လှိုင်းရပ်နေသော လှိုင်းအချိုးကို စကင်န်ဖတ်ခြင်းကို ပံ့ပိုးထားပါသည်။
အလိုအလျောက်ကာကွယ်မှု အချက်ပေးနှိုးဆော်သံနှင့် မှတ်တမ်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်ပါရှိသော အသင့်ပါရှိသော အချက်ပြမှတ်တမ်း အသံဖမ်းစက်ကို အသုံးပြုရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။
အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဒေတာစောင့်ကြည့်ခြင်းနည်းပညာသည် သင့်အား ပြီးပြည့်စုံသော ပင်မစခရင်အသံအချက်ပြစောင့်ကြည့်ခြင်းကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
19U အမြင့်ရှိသော 2-လက်မ စံကိုယ်ထည်သည် သင့်လိုအပ်ချက်များကို အပြည့်အဝဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။